FBC - Qiddus Giyoorgis lammii Poorchugaal Maanu’eel Vaaz Piintoo leenjisaa kilabichaa haaraa godhee muude
FBC Roobii Waxabajjii 13 2010 E.C. - Wednesday, June 20 2018 G.C.
Obbo Zayinuu Jamaal Koomishinara Koomishinii Poolisii Federaalaa ta’uun muudaman
Peentaagoon shaakala waraanaa Kooriyaa Kibbaa waliinii dhaabuu isaa beeksise
DhMG jijjiirama Ityoophiyaa keessatti dhufaa jiru dinqisiifatan
Waltajjiin marii afyaa'ii fi itti aanaa afyaa'ii manneen maree gaggeeffamaa jira
Muummee ministiraa Dooktar Abiy jiraattota Walaayittaa Sooddoo waliin mari'achaa jiru
Qiddus Giyoorgis lammii Poorchugaal Maanu’eel Vaaz Piintoo leenjisaa kilabichaa haaraa godhee muude
Finfinnee, Fulbaana 03, 2010 (FBC) Qiddus Giyoorgis lammii Poorchugaal Kaarlos Maanu’eel Vaaz Piintoo leenjisaa haaraa godhee muuduunsaa himameera.
Waldaan Ispoortii Qiddu-giyoorgis fi leenjisaan Poorchugaal Kaarlos Maanu’eel Vaaz Piintoo gidduutti waliigalteen waggaa lamaa mallatteeffameera.
Leenjisaan waggaa 43 kun ragaa leenjisaa Gamtaa Waldaa Kubbaa Miillaa Yuuroop A kan qaban yoo ta’u, kilaba Angoolaa Riikreetivoo leenjisuutti turani.
Leenjisaan Poorchugaal kun Kaarloos Maanu’eel Vaaz Piintoo turtii kilaba Angoolaa Rikretiivoo Libooloo waliin qabaatanitti milkaa’inni galmeessisan guddichi kilabichi ramaddii garee Waancaa Konfedereshinii Afriikaa keessa akka galu gochuu isaaniiti.
Leenjisaan kun waggoota lamaan dhufaniif kilaba Qiddus Giyoorgis waliin akka dabarsan himameera.
Waggoota dorgommii lamaan darban Qiddus Giyoorgis waliin leenjisaa ta’anii kan dabarsan Mart Nuuy sababa rakkoo fayyaan hojii guyyaa guyyaa kilabichaa irraa erga adda ba’anii ji’oota 4 boodadha Qiddus Giyoorgis leenjisaa haaraa kan muude.
Oduuwwan Biroo « Shaampiyoons liigichaan Cheelsii fi PSGn galchii bal’aan injifataniiru	Shaampiyans Liigii: Riyaal Maadrid, Maanchistar Siitii fi Totanaam wayita injifatan Liivar-Puul qixa adda ba’eera »